nidaamka ATOS la shidaalka soo dhaweynta (Euro Diesel) No. 4734 waxaa lagu Abaal marin by nidaamka furan sida uu Qodobka 19 sharciga soo iibsiga dowladeed. Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan hindisada hoos ku qoran:
Lambarka Diiwangelinta Dukumiintiga: 2017 / 593417
130.000 Lt. Iibsiga shidaalka (Nawaaxiga Euro) leh nidaamka ATOS.
b) Goobaha loo diro: Konya, Afyonkarahisar, Burdur, Kutahya, Eskisehir, Isparta, Balusiiri horay, iyo sidoo kale gobolka Afyonkarahisar, shaah, Sandikli, Dinar; Tavsanli oo ku taal gobolka Kutahya; Iskuullada shidaalka oo ku habboon nidaamka ATOS ee degmooyinka Ceelgaan, Aksehir, Sarayönü ee gobolka Konya.
c) Taariikhda bixinta: Ka dib marka heshiiska la saxiixo, shaqooyinka rakibidda ATC iyo qalabkeeda waa in lagu bilaabo 10 (toban) maalmood.
b) Taariikh iyo waqti: 14.12.2017 - 14: 30
Notice iibsiga: Yufraad Road Station Rakibaadda Length iyo Dhismaha digayaan iyo Isgaarsiinta System Job
Ogeysiiska Qandaraaska: Qaybta Diiwaangelinta Dhismaha ee Mashruuca Korontada ee Qaranka, Qalabka Dheeraadka Dheerka ah (TÜVASAŞ)